Istaraatiijiyada Weyn ee Oscar: Ma Dhabbaa In Lacag La Sameeyo? | vfxAlert official blog
Istaraatiijiyada Weyn ee Oscar: sheeko faaiido weligeed ah
Qofna ma doonayo inuu culeys saaro, wax cusub barto kana walwalo natiijada. Way fiicantahay in la helo farsamo "sixir" ah oo macaash laga helo wakhti kasta, meel kasta. Waxba kuma khaldana: ka tagida aagaaga raaxada marwalba waxaa la socda walaac. Haddii aad gasho mashiin kasta oo raadinta weedha ah « sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah » ee bogga ugu horreeya, had iyo jeer waxaa jiri doona istiraatiijiyad Oscar Grand ah.
Xusiddii ugu horreysay ee khamaarka waxay dib ugu laabanaysaa Masar hore oo laga yaabee xitaa markaa inay jireen halyeeyo ku saabsan ciyaartoy maalin kasta oo ka tagaya hay'adaha leh jeebado buuxa oo lacag ah. Kuwaas waxaa ka mid ah Grand, oo aan weligiis la arag. Waxaa jira fikrad ah in magaca qoysku uu ka yimid Ingiriis «grind», sidaas darteed waxaa loogu yeeraa ciyaartoy leh sharad yar. Maaddaama ayan wax macno ah lahayn, aan eegno tallaabooyinka sida habka u shaqeeyo:
1. Xullo xaddiga macaamilka ugu horreeya, ama marka loo eego istiraatiijiyadda “Hal”, boqolkiiba inta lacagta hadda dhigata. Haddii aad u hoggaansanto maareynta lacagta adag, kama gudbeyno 3-5% oo ha iloobin in bixinta ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ah ay had iyo jeer ka yar tahay 100% wayna adkaan doontaa in la magdhabo khasaaraha marka loo eego Forex.
2. Fur ikhtiyaarka koowaad qadarka «Kow».
3. Haddii khasaaro la helo, qadarka ganacsiga soo socda ma kordhayo.
4. Marka laga hadlayo dakhliyada waxay kordhayaan cabirka «Hal».
5. Sii wad ganacsiga, adoo ku dhagan waxyaabihii hore, illaa iyo inta khasaaruhu magdhaw ka helayo faa iidada u dhiganta «One» laga helayo. Halkani waa halka wareegga uu ku dhammaado, waxaanna ku bilaabaynaa sadarka 1.
Aynu uga gudubno aragtida una gudubno. Aynu eegno tusaale leh ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo bilow ah $ 5 iyo qaddar 85% ah.
Waxaa jira xisaabaha internetka ee lacagta ah oo ilaa 95%, laakiin dhammaan dilaaliinta lahayn gunooyinka sida oo kaliya on hantida qaar ka mid ah. Waxaan qaadaneynaa nooca celceliska .
Jadwalka waa la sii wadi karaa waxaana lagu dhejin karaa faa iidada / qasaaraha halka lagama maarmaanka u ah wuxuuna kugu qancin karaa in istiraatiijiyaddu aysan lahayn khasaaro. Fiiro gaar ah u yeelo inta meheradood ee guuleysta loo baahan yahay si isku xigxig ah si loo magdhabo khasaaraha hadda jira! Way fududahay in tan lagu sameeyo warqad, laakiin calaamadaha dhabta ah ee ganacsiga, waxaa jira dhibaatooyin, oo aan ka wada hadli doonno xagga hoose.
Internetka, waxaad ka heli kartaa xulashooyinka lacag bixinta ee istiraatiijiyadda, xitaa sawirrada Oscars. Dabcan, tani waa suuq geyn kaliya; waad ka ganacsan kartaa nidaamka bilaash ah!
Ganacsi Let bilaabatay
Kahor intaadan adeegsan istiraatiijiyadda, waxaad u baahan tahay inaad xalliso dhowr dhibaato oo muhiim ah:
• «Fur xulashada xigta» . Laakiin goorma si sax ah loo galo suuqa? Haddii, markaad isticmaaleyso Martingale oo leh laba jibbaar, tan waxaa la sameeyaa isla marka uu dhammaado heshiiska hadda socda iyada oo aan la falanqeyn suuqa hadda jira, markaa sharaxaadda istiraatiijiyadeena wax talo ah kama siinayso arrintan.
Haddii aad wali isticmaasho istiraatiijiyad ganacsi, hubi inay siiso ugu yaraan 70% calaamadaha nool ee ikhtiyaari ikhtiyaari ah; haddii kale, way adkaan doontaa in magdhaw laga bixiyo khasaaraha. Dhib malahan in Mashiinka la isticmaalay iyo in kale .
• Dhamaad . Waa xisaabinta khaldan ee ikhtiyaaraadka dhacayo taas oo inta badan keenta khasaaro, xitaa haddii barta laga soo galo iyo jihada CALL / PUT si sax ah loo go'aamiyo. Laakiin, farsamadu waxay soo jeedinaysaa ganacsi sidii haddii uusan dhicin dhammaadkeed oo kuwa bilowga ah ay ku dhici karaan dabinka «guuleysiga» khiyaaliga ah.
The dhakhso ah ganacsade ka bilowdey fekerayo marka la eego waqtiga, ma lacag, dheer waxay joogi doono suuqa!
• «Suurtagalnimada taxane dheer oo ganacsi lumis ah ayaa ah mid la iska indhatiri karo oo nidaamka Oscar Grind ayaa had iyo jeer magdhaw ka bixiya khasaaraha isla markaana faa iido ka hela» . Immisa jeer ayaa weedh la mid ah noocyo kala duwan laga heli karaa websaydhada iyo xayeysiinta laba-geesoodka ah «farsamooyinka xuquuqda daabacaadda». Marka, waxaa jira habeyn qarsoodi ah oo dadka cusub ku jiheysan jihada Martingale: looma baahna in laga fikiro, waxaan u furnaa jiho kasta, maxaa yeelay maalin uun qasaaraha waxaa xigi doona faa iido. Waa wax laga xumaado in suuqa uusan ka warqabin hadalada noocaas ah; eeg tusaalaha barnaamijka calaamadaha OlympTrade.
Dhinaca bidix, waxaan ku aragnaa tusaale tusaale ah sida suuqa uu u “qaban karo” isbeddelka muddo dheer, ficil ahaan hoos ayuu u dhacayaa iyada oo aan la helin sixitaan iyo dib u celin, kaliya iyadoo muddo gaaban la isku daro. Way fududahay in la fahmo in jihada si khaldan loo doortay, qasaarooyin isdaba joog ahi ay, haddii aan gebi ahaanba la laaban karin deebaajiga, ka dibna ay bixiyaan hoos u dhac sidan oo kale ah, si looga baxo taas oo loo baahan karo ganacsi muddo dheer si isku mid ah u faa'iido leh, waana aad u adag in daqiiqad sidan oo kale ah la qabto.
Dhinaca midig waxaa ka jira xaaladda ka soo horjeedda: hoos u dhaca iyo kor u kaca soo socda ee soo raacaya waxay ku sugnaayeen waddo aad u ballaadhan, waxaad isku dayi kartaa inaad furto xulashooyin dib uga soo kabashada xuduudihiisa, adigoo ilaalinaya xeerarka istiraatiijiyadda. Waa muhiim in la fahmo waqtiga markii dhaqdhaqaaqa dhamaado, oo waxaan mar kale u nimid isticmaalka tilmaamayaasha farsamada iyo walxaha kale ee falanqaynta suuqa oo dhameystiran.
Goorma ayaa istiraatiijiyaddu wax ku ool noqon doontaa? Kaliya dhanka suuqa dhinacyo badan oo uguyaraan 30-50 dhibcood. Halkan waxaad runtii ku rumaysan kartaa in taxanaha lumintu uusan ahaan doonin mid aad u dheer oo ay suurtagal noqon doonto in la xiro khasaaraha iyada oo aan loo oggolaan kala-bax weyn. Waxa ugu muhiimsan maahan in laga ganacsado calaamadaha binary marka marinku bilaabo inuu yaraado, isbeddelku wuu dhow yahay. Khatarta ha galinin marka ay jiraan 10-15 dhibcood inta udhaxeysa khadadka taageerada / iska caabinta!
Waa wax aan macquul aheyn in la helo xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan sida istiraatiijiyaddu dhab ahaan ugu shaqeyso xulashooyinka ikhtiyaariga ah, badiyaa waxaa jira jaantusyo iyo faa'iido isku mid ah oo la mid ah:
Waa maxay macluumaadka waxtarka leh ee aad ka heli karto sawirka? Jawaab: waxba. Ugu horreyntii, ma cadda aaladda loo adeegsaday in tan lagu sameeyo, maxaa yeelay software-ka calaamadaha binary-ka ma laha qaabab tijaabo ah oo la dhisay. Xaaladaha ganacsiga sidoo kale lama shaacin: hantida, qadarka, waqtiga uu dhacayo iyo arrimo kale oo muhiim ah la'aantoodna aysan macquul aheyn in si ku filan loo qiimeeyo natiijada.
Inta lagu guda jiro daabaco news aasaasiga muhiim ah iyo tirakoobka, waxba ma aynu samayn fursadaha u furan 30 daqiiqo ka hor news iyo 30 daqiiqo ka dib markii la daabaco, ganacsatada taxaddarka leh way xiri karaan heshiisyada hadda socda. Si loo xakameeyo dhacdooyinka, waxaan isticmaalnaa jadwalka dhaqaalaha ee ku jira dhammaan meheradda ganacsiga binary ee caanka ah!
Sidoo kale, fiiri inta Martingale socday (xitaa adoon ogeyn waqtiga). Natiijada noocan oo kale ah laguma heli karo iyadoo si fudud loo labanlaabayo mugga ganacsiga soo socda. Saameynta istiraatiijiyadda ganacsiga ee go'aaminta barta laga soo galo iyo jihada ikhtiyaarka ayaa halkan ka muuqata. Sidaa darteed, imtixaanka lama oran karo «nadiif» shaxdan oo kalena laguma kalsoonaan karo.
Waxaan si joogto ah u qaadan faa'iido. Martingale had iyo jeer wuxuu u horseedaa oo keliya khasaaro, markaa isticmaal xilliyada isbeddel xoog leh illaa ugu badnaan .
Aan soo koobno . Calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee 'Oscar Grand' oo bilaash ah ayaa ah nooc kale oo ka mid ah 'jilicsanaanta' Martingale, taas oo, inkasta oo ay gaabis tahay, had iyo jeer u horseeddo luminta deebaajiga. Looma adeegsan karo gooni ahaan falanqaynta guud ee suuqa. Waa inaad ogaataa goorta, meesha iyo waqtiga uu dhacayo si loo furo ikhtiyaar. Kadibna kaliya go'aan ka gaar in la kordhiyo qadarka macaamilka iyo in kale.